ကိုဗဈကွောငျ့ ကှယျလှနျခဲ့တဲ့ သူတှေ ရဲ့ မိသားစုတှေ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှေ ကို အပွဈမမွငျ ကွပါနဲ့ – Let Pan Daily
ကိုဗဈကွောငျ့ ကှယျလှနျခဲ့တဲ့ သူတှေ ရဲ့ မိသားစုတှေ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှေ ကို အပွဈမမွငျ ကွပါနဲ့
Let Pan | October 29, 2020 | Local News | No Comments
ဒီရကျပိုငျး ဖဘေု့တျ ပျေါမှာ ကိုဘဈနဲ့ သဆေုံးတဲ့ သူတှေ ရဲ့ ကနျြရဈသူ မိသားစုတှကေ မကမြေနပျ ရေးတဲ့စာတှေ ဖဘေု့တျ ပျေါတကျလာပါတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှကေို မကနြေပျတဲ့ အသံတှဆေူညံလို့ပေါ့။ သူတို့ရဲ့မိဘ ဆှမြေိုးသဆေုံးမှုတှမှော ဖွဈသငျ့တာတှေ လုပျသငျ့တာတှေ မလုပျလိုကျရလခေငျြးဆိုပွီး စိတျနာပွီး ရေးထားကွတာပါ။ ဒီနရောမှာ ကမြပွောခငျြတာက ကနျြရဈသူ မိသားစုရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို ကိုယျခငျြး စာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျကိုယျတိုငျလညျး အဖလေညျး ဆုံးဖူးသလို ယောကြားလညျးသဖေူးပါတယျ။ သားသားငယျငယျက နမေကောငျး ခဏခဏဖွဈတတျလို့ အမနေရောကလညျး ပူပငျတတျပါတယျ။ ဒါပမေညျ့ ကိုယျ၌က ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးဖွဈခဲ့ဖူးလတေော့ အခုကာလ အကပျြအတညျးထဲက သူတို့ရဲ့အနအေထားကိုလညျး မှနျးဆမိနတောမို့ ဒီစာကို ကွားခပြွီး ရေးမှာပါ။
အခုခတျေမှာ လကျသညျးထိပျမှာ တိုငျးတာတဲ့ စကျလေး တှဖေူ့းကွပါလိမျ့မယျ။ Pulse Oxymeterလို့ ချေါပါတယျ။ သှေးလညျပတျမှုအတှငျး oxygen O2 ကိုတိုငျးတာ (SP O2 လို့ချေါပါတယျ) အရေးကွီးတဲ့ အခနျး ကဏ်ဍမှာ ပါ ပါတယျ။..ပွနျပွောပါ့မယျ။ SP O2 တိုငျးတဲ့စကျ Pulse oxymeterပါ။ ဘာကိုရညျညှနျးတာလညျး ဆိုရငျ အသကျရူသှငျးလိုကျတဲ့ oxygen ကို သှေးက ၁။သယျဆောငျသှားပွီး၂။ လိုအပျတဲ့ ကွှကျသား/Muscle တှဆေီကို ရောကျသညျအထိ ပို့ပေးခဲ့သညျ့ oxygen % လို့ ပွောတာပါ။ ပုံမှနျ လူကောငျး တဈယောကျမှာဆို လကျထိပျလေး မှာ စကျနဲ့တိုငျးတဲ့ အခါ SP O2 က 97 -100 %ခနျ့ရှိတတျပါတယျ။ အဆုပျနဲ့ပကျသကျ နာတာရှညျရောဂါရှိတဲ့လူတှေ..သှေးကွောကဉျြး ရောဂါ ရှိတဲ့ လူတှမှော ပိုနညျးတတျပါတယျ။ SP O2 ကသြှားရငျ လူနာဟာ မောလာ ကပျြလာ ပွာနှမျးလာတတျပါတယျ။ အဲ့သလို SP O2 ကတြာကို hypoxia လို့ချေါပါတယျ။ နောကျ hypoxia ထကျပိုဆိုးတဲ့ အနအေထားကိုတော့ hypoxiemia လို့ချေါပါတယျ။
ကိုဘဈလူနာတှမှော SP O2 ကတြာ ဆိုးပါတယျ။ hypoxiemia မှ happy hypoxiemia လို့တောငျ ချေါပါတယျ။ ဘာလို့ happyလို့ ပွောသလညျးဆိုတော့ ရောဂါ လက်ခဏာ မပွလို့ (silent) မောကပျြလာတာမရှိတာမို့ လူနာက အေးဆေး ဖွဈနလေတေော့ happy hypoxiemia လို့တငျစားတာပါ။ ရောဂါလက်ခဏာသာ မပွတယျ ။ လူနာကသာ ကောငျးနတေယျ ဆိုပမေညျ့ တကယျက အခွအေနတေော့ မကောငျးပါဘူး။ အဲ့တာကွောငျ့ ကိုဘဈလူနာတှကေို fever clinicတှကေ ဖြားရငျ အိမျမှာ ဆကျကု လို့ မှာပမေညျ့ လူနာဘကျက SPO2…93%အောကျ ကသြှားတာနဲ့ ငါတို့ ဆေးရုံပွေးရတော့မယျ ဆိုတာကို သိနားလညျရပါမယျ။ ဒီနရောမှာ ကမြပွောခငျြတာက ခတျေစားနတေဲ့ post ထဲက သေ သှားတဲ့ အနျတီဟာ နကေောငျးလို့အိမျမှာ ခှေးနဲ့ ကစားနရေငျးနဲ့ SPO2..80 %အထိကသြှားတယျလို့ ရေးထားပါတယျ။ ကမြပွောတဲ့ silent hypoxiemia / happy hypoxiemia ဝငျနတော ကို သူတို့ SPO2 စကျရှိနရေကျနဲ့ မသိခဲ့ကွတာပါ။ သနားစရာ သိပျကောငျးပါတယျ။
အဲ့တော့ တဈခု ထပျမှတျပေးပါ။ SP O2,…93%ဆို ဆေးရုံ တကျရမှာနျော။ ..ထပျပွောပါ့မယျ။ SP O2 ..93% ဆို ရောဂါ ပွငျးထနျ severe အဆငျ့ သတျမှတျပါပွီ။ ဆေးရုံတကျလာရငျလညျး ဆေးရုံမှာ oxygen ရူကွရမှာမို့ အိမျမှာပဲ စကျဝယျရူမယျ မရဘူးလားလို့ မေးရငျတော့ မရဘူးပဲ ဖွရေပါမယျ။ သာမာနျမောကပျြတဲ့ လူနာကို ပေးတဲ့ oxygen နဲ့ ကိုဘဈမှာ ပေးတဲ့ O2 ဟာ ပွငျးအားမတူပါဘူး။ ကိုဘဈပိုးဟာ oxygen သယျဆောငျမှုကိုရော ဖွနျ့ဝပေို့ခမြှုကိုပါ ဖကျြပဈတဲ့အတှကျ အဲ့ဒီ happy hypoxiemia အတှကျ high flow oxygen ပေးတါ ပိုကောငျးပါတယျ။ Air sep လို့ ချေါတဲ့ oxygen concentrator တှနေဲ့covid ကသိပျအလုပျမဖွဈဖူးလို့ ကိုဘဈပါရဂူ မဆေ့ေးဆရာဝနျသူငယျခငျြးက တော့ ကမြကို မှာထားပါတယျ။ သို့ပသေိ oxygen အိုးဆိုသညျမှာလညျး တဈလုံးကို ပေးထါးရငျ ကွာခြိနျ ခဏလောကျအတှငျး ကုနျသှားတတျပါတယျ။ အဲ့တာကွောငျ့ ကိုဘဈခတျေမှာ oxygen ပိုကျလိုငျး ဘယျနှဈလိုငျးတပျဆငျထားသော ဆေးရုံ ဆိုပွီးတော့တောငျကွှားပွောတာ ကွားလာရတာပါ။
ထပျပွောပါမယျ။ ကိုဘဈလူနာဟာ oxygen ရူရငျ SPO2. Level ကိုလိုကျပွီး high conentrated oxygen ကို သုံးတာမို့ air sep ထကျစာရငျ cylinder သုံးသငျ့တယျ။ cylinder ကလညျး ခဏပဲခံလို့ ပိုကျလိုငျးရှိတဲ့ ဆေးရုံဆိုပိုကောငျး တယျ ဆိုတာလေးလညျး မှတျထားပါနျော။ အရငျနကေ့ post မှာ သူ့အမနေားကို ဆရာမ ရောကျလာပွီးမှ စကျကို ဘာလုပျလိုကျလညျးမသိဘူး..စကျက အသံထှကျလာတယျ အရငျက oxygen မထှကျဖူး နမေယျဆိုတာ ကမြအထငျတော့ လူနာ ပိုမောနတေယျ ပွောလို့ oxygen ကို high flow ဖွဈအောငျမွှငျ့ပေးလိုကျလို့ စကျအသံပွငျးလာတာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အဲ့တာကို သဆေုံးသူရဲ့ သမီးက အခုမှ oxygen စထှကျတယျ ထငျသှားတာ နပေါလိမျ့မယျ။ အခုလို ကမြ ယှဉျပွီး ရေးပွနတော သသေူနဲ့ သူ့မိသားစုကို နဈနာစခေငျြတဲ့စိတျနဲ့မဟုတျဖူးနျော။ စာဖတျသူတှေ မှတျမိလှယျဖို့ နားလညျလှယျဖို့ ယှဉျရေးပွတာ ဆိုတာ နားလညျပေးပါရှငျ့ ။ နကျဖွနျဆကျရေးပါ့မယျနျော။ အမြားကွီး တခါတညျး ရေးလိုကျရငျလညျး မမှတျမိမှာ စိုးလို့ပါ။
AYA Covid Center B
ဒီရက်ပိုင်း ဖေ့ဘုတ် ပေါ်မှာ ကိုဘစ်နဲ့ သေဆုံးတဲ့ သူတွေ ရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေက မကျေမနပ် ရေးတဲ့စာတွေ ဖေ့ဘုတ် ပေါ်တက်လာပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကို မကျေနပ်တဲ့ အသံတွေဆူညံလို့ပေါ့။ သူတို့ရဲ့မိဘ ဆွေမျိုးသေဆုံးမှုတွေမှာ ဖြစ်သင့်တာတွေ လုပ်သင့်တာတွေ မလုပ်လိုက်ရလေချင်းဆိုပြီး စိတ်နာပြီး ရေးထားကြတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျမပြောချင်တာက ကျန်ရစ်သူ မိသားစုရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို ကိုယ်ချင်း စာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဖေလည်း ဆုံးဖူးသလို ယောကျားလည်းသေဖူးပါတယ်။ သားသားငယ်ငယ်က နေမကောင်း ခဏခဏဖြစ်တတ်လို့ အမေနေရာကလည်း ပူပင်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမည့် ကိုယ်၌က ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ဖူးလေတော့ အခုကာလ အကျပ်အတည်းထဲက သူတို့ရဲ့အနေအထားကိုလည်း မှန်းဆမိနေတာမို့ ဒီစာကို ကြားချပြီး ရေးမှာပါ။
အခုခေတ်မှာ လက်သည်းထိပ်မှာ တိုင်းတာတဲ့ စက်လေး တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ Pulse Oxymeterလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုအတွင်း oxygen O2 ကိုတိုင်းတာ (SP O2 လို့ခေါ်ပါတယ်) အရေးကြီးတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍမှာ ပါ ပါတယ်။..ပြန်ပြောပါ့မယ်။ SP O2 တိုင်းတဲ့စက် Pulse oxymeterပါ။ ဘာကိုရည်ညွှန်းတာလည်း ဆိုရင် အသက်ရူသွင်းလိုက်တဲ့ oxygen ကို သွေးက ၁။သယ်ဆောင်သွားပြီး၂။ လိုအပ်တဲ့ ကြွက်သား/Muscle တွေဆီကို ရောက်သည်အထိ ပို့ပေးခဲ့သည့် oxygen % လို့ ပြောတာပါ။ ပုံမှန် လူကောင်း တစ်ယောက်မှာဆို လက်ထိပ်လေး မှာ စက်နဲ့တိုင်းတဲ့ အခါ SP O2 က 97 -100 %ခန့်ရှိတတ်ပါတယ်။ အဆုပ်နဲ့ပက်သက် နာတာရှည်ရောဂါရှိတဲ့လူတွေ..သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ ရှိတဲ့ လူတွေမှာ ပိုနည်းတတ်ပါတယ်။ SP O2 ကျသွားရင် လူနာဟာ မောလာ ကျပ်လာ ပြာနှမ်းလာတတ်ပါတယ်။ အဲ့သလို SP O2 ကျတာကို hypoxia လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက် hypoxia ထက်ပိုဆိုးတဲ့ အနေအထားကိုတော့ hypoxiemia လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကိုဘစ်လူနာတွေမှာ SP O2 ကျတာ ဆိုးပါတယ်။ hypoxiemia မှ happy hypoxiemia လို့တောင် ခေါ်ပါတယ်။ ဘာလို့ happyလို့ ပြောသလည်းဆိုတော့ ရောဂါ လက္ခဏာ မပြလို့ (silent) မောကျပ်လာတာမရှိတာမို့ လူနာက အေးဆေး ဖြစ်နေလေတော့ happy hypoxiemia လို့တင်စားတာပါ။ ရောဂါလက္ခဏာသာ မပြတယ် ။ လူနာကသာ ကောင်းနေတယ် ဆိုပေမည့် တကယ်က အခြေအနေတော့ မကောင်းပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့် ကိုဘစ်လူနာတွေကို fever clinicတွေက ဖျားရင် အိမ်မှာ ဆက်ကု လို့ မှာပေမည့် လူနာဘက်က SPO2…93%အောက် ကျသွားတာနဲ့ ငါတို့ ဆေးရုံပြေးရတော့မယ် ဆိုတာကို သိနားလည်ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျမပြောချင်တာက ခေတ်စားနေတဲ့ post ထဲက သေ သွားတဲ့ အန်တီဟာ နေကောင်းလို့အိမ်မှာ ခွေးနဲ့ ကစားနေရင်းနဲ့ SPO2..80 %အထိကျသွားတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ ကျမပြောတဲ့ silent hypoxiemia / happy hypoxiemia ဝင်နေတာ ကို သူတို့ SPO2 စက်ရှိနေရက်နဲ့ မသိခဲ့ကြတာပါ။ သနားစရာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
အဲ့တော့ တစ်ခု ထပ်မှတ်ပေးပါ။ SP O2,…93%ဆို ဆေးရုံ တက်ရမှာနော်။ ..ထပ်ပြောပါ့မယ်။ SP O2 ..93% ဆို ရောဂါ ပြင်းထန် severe အဆင့် သတ်မှတ်ပါပြီ။ ဆေးရုံတက်လာရင်လည်း ဆေးရုံမှာ oxygen ရူကြရမှာမို့ အိမ်မှာပဲ စက်ဝယ်ရူမယ် မရဘူးလားလို့ မေးရင်တော့ မရဘူးပဲ ဖြေရပါမယ်။ သာမာန်မောကျပ်တဲ့ လူနာကို ပေးတဲ့ oxygen နဲ့ ကိုဘစ်မှာ ပေးတဲ့ O2 ဟာ ပြင်းအားမတူပါဘူး။ ကိုဘစ်ပိုးဟာ oxygen သယ်ဆောင်မှုကိုရော ဖြန့်ဝေပို့ချမှုကိုပါ ဖျက်ပစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ happy hypoxiemia အတွက် high flow oxygen ပေးတါ ပိုကောင်းပါတယ်။ Air sep လို့ ခေါ်တဲ့ oxygen concentrator တွေနဲ့covid ကသိပ်အလုပ်မဖြစ်ဖူးလို့ ကိုဘစ်ပါရဂူ မေ့ဆေးဆရာဝန်သူငယ်ချင်းက တော့ ကျမကို မှာထားပါတယ်။ သို့ပေသိ oxygen အိုးဆိုသည်မှာလည်း တစ်လုံးကို ပေးထါးရင် ကြာချိန် ခဏလောက်အတွင်း ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကိုဘစ်ခေတ်မှာ oxygen ပိုက်လိုင်း ဘယ်နှစ်လိုင်းတပ်ဆင်ထားသော ဆေးရုံ ဆိုပြီးတော့တောင်ကြွားပြောတာ ကြားလာရတာပါ။
ထပ်ပြောပါမယ်။ ကိုဘစ်လူနာဟာ oxygen ရူရင် SPO2. Level ကိုလိုက်ပြီး high conentrated oxygen ကို သုံးတာမို့ air sep ထက်စာရင် cylinder သုံးသင့်တယ်။ cylinder ကလည်း ခဏပဲခံလို့ ပိုက်လိုင်းရှိတဲ့ ဆေးရုံဆိုပိုကောင်း တယ် ဆိုတာလေးလည်း မှတ်ထားပါနော်။ အရင်နေ့က post မှာ သူ့အမေနားကို ဆရာမ ရောက်လာပြီးမှ စက်ကို ဘာလုပ်လိုက်လည်းမသိဘူး..စက်က အသံထွက်လာတယ် အရင်က oxygen မထွက်ဖူး နေမယ်ဆိုတာ ကျမအထင်တော့ လူနာ ပိုမောနေတယ် ပြောလို့ oxygen ကို high flow ဖြစ်အောင်မြှင့်ပေးလိုက်လို့ စက်အသံပြင်းလာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တာကို သေဆုံးသူရဲ့ သမီးက အခုမှ oxygen စထွက်တယ် ထင်သွားတာ နေပါလိမ့်မယ်။ အခုလို ကျမ ယှဉ်ပြီး ရေးပြနေတာ သေသူနဲ့ သူ့မိသားစုကို နစ်နာစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဖူးနော်။ စာဖတ်သူတွေ မှတ်မိလွယ်ဖို့ နားလည်လွယ်ဖို့ ယှဉ်ရေးပြတာ ဆိုတာ နားလည်ပေးပါရှင့် ။ နက်ဖြန်ဆက်ရေးပါ့မယ်နော်။ အများကြီး တခါတည်း ရေးလိုက်ရင်လည်း မမှတ်မိမှာ စိုးလို့ပါ။
နောက်နှစ်ရက် အတွင်း မုတ်သုံလေ အားကောင်း မှုကြောင့် တစ်ပြည်လုံး နီးပါး မိုးရွာသွန်းမည့် အခြေအနေ မိုးဇလထုတ်ပြန်
အဖောက် ခံရသည်မှာ ပုဂံဘုရား (၁၂) ဆူထဲဖြစ်၊ ကျန်ဘုရားများ မူလ ထဲက ဌာပနာ မရှိဟု ဆို
ကောလာ ဟလ ထောငျခြောကျမြား နှငျ့ ရပျ ကှကျ ညကငျးမြား
ဒီလို မွငျကှငျးမြိုး ထပျတှေ့ ရပွနျပွီ (ရှဘေိုက ပိုးတှလေူ့နာ အသကျ ၂ နှဈ ကလေးတဲ့)
မကျြရညျတှကွေားက မလေးစားပဲ မနနေိုငျအောငျဖွဈ ခဲ့ရတဲ့ အာဇာနညျ သူရဲကောငျးမလေး ကွယျစငျ ရဲ့ ဖခငျကွီး